10 Tareen Stations Most fiicnaa Spain | Save A tareenka
Home > Tareenka Safarka Isbaanishka > 10 Tareen Stations Most fiicnaa Spain
Waxaa jira tiro ka mid ah saldhigyada tareen xiiso leh oo firfircoon ee Spain. Waxaad ka heli doontaa Xawaare sare, masaafada dhexdhexaad ah, gobolka, iyo nawaaxigeeda iyo hotel-tareenka safraan dalka oo dhan. From saldhigyada casriga weyn in kuwa yaryar ku hareereysan dabeecadda, kuwanu waa 10 ee tareenada ugu xiiso Spain ee.
Barcelona, Spain (Sants Tareen Station)
Saldhiggan casriga ah ayaa ka mid ah xarunta tareenka ugu mashquulka badan ee Barcelona. Waa saldhigga tareenka ugu weyn ee labada qaran iyo heer caalami xidhiidhada tareenka. Idaacadda Tani waa caddaalad ah oo waaweyn oo ku yaal xarunta magaalada. Waxaa loo isticmaalaa by labada deegaanka iyo dalxiisayaasha oo aad ku xidhi doonaa ugu tareenada oo dhan Spain.
Madrid (Puerta de Atocha Tareen Station)
Idaacadda Tani waa ka ugu weyn ee Madrid iyo qiyaastii sanado badan. Waa saldhiga u qurux badan and one of the most Fascinating Train Stations, in yaala beerta iyo qubo meesha quduuska ah oo qurux badan kulaylaha gudaha. on March 11, 2004, maalintii oo hadda loo yaqaan 11-M ee Spain, 191 qof ayaa lagu dilay taxane ah oo qaraxyo. Waxay ka dhacay afar tareenada labadaba rugtan iyo dhow.
Sevilla (Santa Justa Tareen Station)
Santa Justa waa saldhigga saddexaad ee ugu mashquulsan ee Spain, iyadoo wadar ahaan laba iyo toban dhufto ee. Waxaa la magacaabay ka dib markii mid ka mid ah quduusiinta jecel Seville ee (walaashiis of Santa Rufina). dhismaha waxaa ku yaalla qaybta bari ee bartamaha magaalada Seville ee. dhista The nadiif ah iyo design waa tusaale ka mid ah qorshayaasha casriyeynta magaalada ee 1991.
Ronda ayaa la sheegay in mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan ee Spain. doorashada Tani Isbaanish ah soo jiidasho leh in Tareenku Stations waa tilmaan of this, oo sida xaqiiqada ah waa in-arki. Idaacadda ayaa waxaa la dhisay ka dib 1892, si kastaba ha ahaatee, waxaa la simay iyo yaab hayo sanadihii la soo dhaafay. Idaacadda ayaa weli ka eegno Indian "Anglo" ama gumeysiga in kastoo. Cirkana dhismo alwaax-fringed waxa taageeraya on tiir bir sameeyey oolna ah madal ay ku dhagan.
Puebla de Sanabria Tareen Station
Idaacadda Tani waxa uu ku yaalaa magaalada qurux badan jir ah Zamora. Waa mid ka mid ah saldhigyada tareenka ugu caansan Spain sababtoo ah quruxdiisa taas oo ay sabab u tahay naqshadaha gobolka iyo dhaqanka, la rooves Baladweyne, dhagaxyo ashlar iyo Guddoonka xafiiltamaan dhexe weyn. Idaacadda Tani waxay sidoo kale caan ku tahay habboon waxay lahayd on la Ruta de ka Plata sidii xiriir kaalinta.
Zamora in Tareenku Station
Idaacadda Tani waxa uu ku yaalaa magaalada Zamora in Castile iyo Leon oo waxaa loo arkaa inay mid ka mid ah tareenada ugu xiiso sameeyay. Its dhismaha lahaa in la joojiyay in 1929 iyo ugu dambeyntii waxaa la soo gabagabeeyey 1958. Waxay leedahay a captivating Renaissance faahfaahinta qaar ka mid ah in ay yihiin xusuusin ah ee style a dabayaaqadii Gothic waxyoonay. Waxaa runtii waa neefta-qaadashada.
Estacion del Norte Tareen Station
saldhigga tareen Tani waxaa laga heli karaa magaalada San Sebastian, meel aad u qurux badan oo bixiya labada badda cajiib ah iyo views buurta. Idaacadda Tani waa jiidashada ah oo iniinahoodu ku dhex Cirkana dhismo iyo dedkeeda dhufto ee la loogu talagalay by Gustave Eiffel waa kuwa qofka aad isla loogu talagalay Tower Eiffel ee France.
Canfranc Estacion Tareen Station
Tani qaado tagay of xiiso in Tareenku Stations waxaa laga heli karaa xadka u dhaxeeya Spain iyo France. Waxaa la furay 1928 iyo tilmaamo "Titanic oo ka mid ah Mountains."Waxaa la dhisay si kor loogu qaado ganacsiga ee ka dhexeeya labada dal, laakiin ka dib markii aan la hayo oo la iskaga tegay tan 1970. Idaacadda ayaa waxaa ku dhacaya xabbadood maanta. Dalxiisayaal weli awoodaan si ay u arkaan muuqashadii ah sida grand waxa ay ahayd in ay maalin. dalxiisayaal Spanish More ayaa booqday goobta tan 2013. In ka badan tirada dadka abid booqday saldhiga halka ay ahayd furan.
Estacio del Nord Tareen Station
Tani waa saldhigga tareenka ugu weyn ee magaalada Valencia. Waxaa la dhisay 1917 oo waxay noqdeen calaamad u ah naqshadda dhismaha casri Yurub. Waa dhisme weyn oo leh saacad weyn iyo farshaxan gorgorku ee xarunta, kuwaas oo qaar ka mid ah xubno ka wakiilka ka ah saldhigga maanta. Tani qaado of xiiso in Tareenku Stations waxaa sidoo kale loo arkaa dhismaha ah Interest Cultural.
Algeciras Tareen Station
Idaacadda Tani waxa uu ku yaalaa ee qaybta sare ee Algeciras iyo a dhowr kiilomitir dekedda ay sabab u tahay shuruud taariikhiga ah in loogu tala galay wuxuu lahaa inuu garoomada kala duwan ee Gibraltar madfac 100-ton ah. This train is used by people who would like to visit the Dhagaxii weynaa ee reer Gibraltar. Waxaa markii hore la furay 1982 oo weli eegno jir-iskuul iyo dareemaan in ay.
Inkasta oo ay jiraan tiro ka mid ah iyaga ka mid ah oo ka hawlgala Spain maanta, kuwanu waa 10 saldhigyada tareenka ugu xiiso Spain ee ay soo booqdaan. safarka tareenka waa qayb weyn oo ka mid ah gaadiidka dadweynaha nidaamka dalka oo si qumaati ah ee guud ahaan guddiga. Waxaa jira tiro ka mid ah safarada maalin qurux badan iyo sidoo kale adventures badan habeenkii in la lahaa tareen oo waxaa haboon inta u leh adeegsiga tareenka marka aad booqato Spain.
Raadi tikidhada ugu fiican oo ugu jaban ee Europe Save A tareenka, Waxa Loo Baahan Yahay 3 minutes now to book a train ticket on Save Tareenku. u Stations tareenka ugu fiicnaa Spain, Bixi iyadoo la isticmaalayo oo dhan hababka lacag bixinta oo caan ah oo ay ku jiraan, credit card iyo Paypal.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-fascinating-train-stations-spain%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah
europeantravel tareenada TrainStation safarka travelspain